Wafdi kasocda Dowladda Faderaalka oo kusii jeeda Baardheere – Radio Daljir
Maajo 6, 2018 7:21 b 0
Wafdi kasocda Dowladda Faderaalka ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay maanta gaaraan magaalada Baardheere ee gobolka Gedo, kuwaasi oo loo igmaday gurmadka fatahaadda wabiyada Jubba iyo Shabelle.
Wafdigan oo uu hogaaminayo raysal wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa waxaa ku jira culimaa’udiin iyo xubno katirsan labada golle ee dowladda.
“Warbixinta aan helnay ayaa sheegeysa in deegaanno kale oo badan ay daadad saameeyeen, marka dawladdu waxa ay bixineysaa Nus Malyuun dheeraad ah si loogu gargaaro dadka dhibaatadu kasoo gaartay fatahaadaha”, ayuu yiri Ra’iisul wasaare ku-xigeenka oo ka hadlayay lacag dhan nus malyuun doolar oo ay dowladda ugu deeqday gurmadka dadka ay barakiciyeen fatahaadda labada wabi ee Jubba iyo Shabeelle.
Magaalooyinka ay maraan wabiyada Jubba iyo Shabelle ee Soomaaliya ayaa waxaa ka barakacay dadkii ku noolaa, kadib daadad kadhashay fatahaadda oo saamayn ku yeeshay guryaha, waxaana socda kulamo ay bulshada Soomaaliyeed dhaqaalle ay ugu gurmanayaan dadka masiibadu ay lasoo daristay.
Boqor Buurmadow oo mar kalle horimaanaya maxkamadda